Islaamka iyo Gudniinka Fircooniga ah-DHAGEYSO | Radio Muqdisho
Islaamka iyo Gudniinka Fircooniga ah-DHAGEYSO
Published on February 5, 2013 by Admin 2 · 4 Comments · 4,340 views
Caadada Gudniinka Gabdhuhu waa mid aad uga jirta dalal dhowr ah oo dunida ku yaalla oo uu dalkeenna Soomaaliya ku jiro.
Dalalka qaarkood mar hore ayay ka gudbneen caadad gudniinka ee lagu jarjaro xubnaha taranka ee gabdhaha, halka dalalka qaarkoodna wali hablaha lagu kawaano oo si arxan la’aan ah loo jarjaro jirkooda.
Haweenka loo gudo habka loo yaqaanno Fircoonigu waxay la noolaadaan dhibaato aan noloshooda ka harin, waxay ku dhibtoodaan caadada, Guurka iyo dhalmada intaba, qaar badan ayaana foosha ku dhinta.
Gudniinka Gabdhaha gaar ahaanna Fircoonigu waa caado dhaqameed arxan la’aan ah oo shareecada iyo Insaaniyadda ka horjeedda, ayna hablaha Soomaaliyeed ku dhib qabaan. HALKAAN KA DHAGEYSO BARNAAMIJKA TUBTA TOOSAN
Qodobka 15 aad ee dustuurka Soomaaliya faqraddiisa Afaraad ayaa dambi ka dhigeysa gudniinka gabdhaha waxayna leedahay :
Maxaa ka jira doodda ah in gudniinku gabadha u horseedo dhowrsanaan? taasi sabab ma u noqon kartaa in la jarjaro hablaha jirkooda mustaqbalkoodana god lugu rido.
Gudniinka gabdhaha iyo mowqifka Islaamka , waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Cabdullaahi Axmed Garruun.
yaasir says:	February 5, 2013 at 3:44 pm	waa barnaamij wanaagsan runtii
Reply »	daryeel says:	February 6, 2013 at 6:36 am	gabdhaha ha raaxaystaan ee yaan lagudin. Somaluda waxay aaminsantahy hadii aan gabadha fircooni loo gudin in ay sharmuutobayso lakiin xaqiiqda taa wayka fogtahay ee illaah ukaso ayay maraysaaa.
Reply »	kulane says:	February 6, 2013 at 9:59 am	ascww awalan allah ayaa mahadleh midkale horta waxaan rabnaa mid in naloocadeeyo waxaan jira gudnin wagaranay taas iyo sidiii somali wax u gudan jirtay laakin diinta maxay kaqabtaa ?waa su,aasheyda kowaad tan hadan wiliba mid raacsado waxaa sugan in guninka shariciyahay laakin ?seekuyahay ? waa su,aalkale hadan tan waxyar ka iftiinsho mid yaan wax lagu dhisin dadkana yay ku sinbiririxan waxaad arki doontaa wadaad latagan gudninka fircooni waa waa jib maxaa loogu jawaabi doonaa shalaba rag aa nooshegay in uu sharciyay ?walalyaal aan gatano diinta kow waxaan dumarka in lasuneyo oo ladhiigeeyo sida adunida islamka kajirta fircoon gaal ayuu ahaa bal illah nimo shegtay maxaa wax nuugudaray ?ragkale dhankale ayay uga bexeen waa raga yiri yaan dumarka lataban garo in ay sharci yahay oday laakin fircoon wax layiraa majiraan illah xaqa hana waa fajiyo walalah radio muqdisho waad mahadsantihiin dhaqan xumo bananka hala keeno
Reply »	idow says:	February 20, 2013 at 2:23 am	Masha alah